ब्लग कला / साहित्य
विमल नेपाल काठमाडाैं, २८ वैशाख
फेरि चुरोट सल्काएँ । पाइलट । अब एउटा मात्रै बाँकी छ । साँझसम्मलाई त पु-याउनैपर्यो । आधा मात्रै तानेर स्टिलको कचौरामा निभाएँ । खरो चुरोटले मुखै सुकायो । बाल्टिनबाट झिकेर आधा जग पानी कलकल पिएँ । लामो श्वास तानेर फेरि ढल्किएँ, मैलो तन्नामाथि ।
शान्तिनगरस्थित सान्तोना गल्लीभित्रको चिसो र अँध्यारो कोठा । दिउँसोको तीन बजेको हुँदो हो ।
नोकिया ११०० मोडलको मोबाइलमा रिङटोन बज्यो– ‘तिरिरी मुरली बज्यो वनैमा, मनैमा लौ माया नमारे..’
सेभ नगरेको नम्बर । ४२ को लाइनबाट आएको रहेछ फोन । रिसिभ गरें ।
‘नमस्ते विमलजी,’ केटीको स्वर ।
‘नमस्ते, तर मैले चिनिनँ नि !’
‘म हाम्रो टेलिभिजनबाट । तपाईंले जब एप्लिकेसन दिनुभएको रहेछ । सर्ट लिस्टमा नाम निस्किएको छ । भोलि बिहान १० वजे अन्तर्वार्ताका लागि आउनुहोला भनेर ।’
‘ए........... हुन्छ हजुर । हवस् ....।’
फोन उतैबाट राखियो ।
एकैक्षणमा मेरो शरीरभरि बिलकुल नयाँ रगत भरियो, उत्साहको । मेरो धोको पूरा हुने भयो । सर्ट लिस्टमा नाम निस्किएछ । अब जागिर खाने भइयो, टिभीमा । मेरो सपना पूरा हुने भयो । कसले भन्छ, मलाई अभागी ! नहुन्जेल नहुने त हो भएपछि भइहाल्छ नि ! यस्तो लाग्यो, सपनाको कम्पाउन्ड गेट उघ्रियो ।
तुलबुल, चुलबुल र उत्साही मन । एकैचोटि टेलिभिजनको लोगो राखिएको माईक्रोफोन(बुम) हातमा छ । प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै छु, कल्पनामा ।
बाँकी ठुटो चुरोट सल्काएर स्टोभमा सिल्भरे ताप्के बसालें, चिया पकाउन । चिनी निकै कम रहेछ । पानी घटाएँ र चियासँगै सल्काएँ । बाँकी अर्को चुरोट । सपनाका अनेक तानाबाना बुनिरहें ।
साँझको ६ बजे छ । माघ । झमक्क रात परिसकेछ । फेरि चुरोटको तलतल लाग्यो । ¥याक घर्रा उघारें– एउटा पनि चाउचाउको कुपन बाँकी रहेनछ ।
पाथिभरा होटल गएँ । जहाँ मेरो उधारो बाँकी थिएन । एउटा तोङ्वामा दुई गिलास कोदोको मिसाएँ र तानें । पाँचवटा सूर्य चुरोट बगलीमा राख्दै ‘यसको भोलि दिन्छु’ भन्दै बाहिरिएँ । प्रतिक्रिया नै नसुनी ।
पछिल्लो समय सबैभन्दा खुसी भएको दिन । सदाभन्दा चाँडै उठें । जाँगरका साथ फ्रेस भएँ । चिया पकाउन ताप्के बसालेपछि याद भयो, चिनी छैन । महेन्द्र दाइको पसलमा गएर बिन्ती बिसाएँ । ढिलो नगर्ने वाचा गर्दै आधा किलो चिनी, एक किलो चामल, एक पाउ भटमासको मस्यौरा र पाँचवटा सूर्य चुरोट ल्याएँ ।
टाउको पखालें । कपाल पनि लामालामा छन् । नङ पनि लामो र मैलो । कपाल काट्न चाहेर पनि सक्दिनँ । नेल कटर पनि छैन । दाह्रीजुंगा पनि लामो भइसक्यो । अघि महेन्द्र दाइकहाँबाट ब्लेड ल्याउन पनि बिर्सेछु । अब दुई रुपैयाँको एउटा ब्लेड पनि के उधारो माग्नु ? त्यसैमा सेटल गरें ।
टावेल मैलो भए पनि मुख र कपाल पुछें । अमलाको बास्ना आउने तेल लगाउने धोको पूरा भएको छैन । घरबाट मसीको भाँडोमा ल्याएको तोरीको तेल पनि सकिएछ । भाँडोको पिँधमा पुतलीहरु मरिरहेछन् । कपाल फुस्रो छोड्नुभन्दा भटमासकै तेल लगाउनु बेस लाग्यो ।
भात र मस्यौराको तिउन पकाएँ । मीठो भएन । मसला नहालेको तिउन के मीठो हुनु ? फेरि अन्तर्वार्ता दिन जाने दिन भएर पनि होला !
पाइन्ट लगाएँ । बटम खुस्केको पाइन्टलाई बेल्टले कसें । मैलो भनेर राखेको टिसर्ट सुकिलो नै लाग्यो । भिस्टा जुत्ता । सोल प्वाल परेर मसिना ढुंगा र बालुवाभित्र छिरेका । तर, झट्ट हेर्दा ठीकै छ ।
जाडो छ । ज्याकेट त लगाउनैप-यो । यसपालि ज्याकेट किनिनँ वा सकिनँ । उध्रेको ठाउँमा स्टिकर टाँसेको छु, देख्दै थोत्रो र पुरानो । रुम पार्टनर दाजु अच्युतको ज्याकेट लगाइहेरें । लेदरको ज्याकेट अलि ठूलो लाग्यो । मेरो ज्यान र अन्य पहिरनसँग म्याच नभएजस्तो । तैपनि, मसँग जाडो छेल्न र परिस्थिति सुहाउँदो त्यही नै निर्विकल्प थियो ।
चिटिक्क परेर बाहिर निस्किएँ । बेग्लै लागिरह्यो मनमा । भित्रभित्रै खुसी थिएँ ।
‘हिरो पल्टेर कता ?’ महेन्द्र दाइले सोध्नुभयो ।
‘कता हो सर ?’ मोटे चिया पसलेले सोध्यो ।
‘घुमघाम त हो नि !’ मेरो उत्तर ।
कस्मेटिक पसलकी केटीले पनि हेरी । मुस्कुराएँ । बाटामा भेटिने कलेज गर्लहरुको आँखा पनि मैमाथि थियो । मुसुमुसु हाँस्दै हिँडिरहें । कताकता अड पनि लागिरहेको थियो । कतै कमेडी पात्र त बनिरहेको छैन । तैपनि, मान्छेहरुको आँखा मैमाथि थियो ।
अनायास ‘म जुजुमान’ कथाको याद आयो । एउटा सैलुनभित्र छिरें । कपाल त मिलेकै थियो, तैपनि मिलाएँ । पूरै ज्यान ऐनाअगाडि पु¥याएँ । टिसर्ट उल्टो लगाएछु । भित्रभित्रै खङ्ग्रङ्ङ भएँ । मान्छेहरुको आँखा ममाथि पर्नुको कारण पत्ता लगाएँ । त्यो मैले साइड हान्ने केटीको हेराइ र मुस्कानको चित्र सम्झें । हत्त न पत्त सैलुनभित्रै टिसर्ट सुल्टो बनाएर लगाएँ । त्यहाँ नै पो देखियो, स्प्रे नगरेर सेतो देखिएको लेदर ज्याकेट । सैलुनकै पानीले ज्याकेटको ढुसी पुछें ।
‘महेन्द्र दाइ र चिया पसलेले किन मेरो टिसर्ट उल्टो छ भनेर भनेनन् ?’
थापागाउँ, अनामनगर हुँदै रत्नपार्क पुगें । शान्तिवाटिका पार्कमा उभिएर एउटा चुरोट सल्काएँ । र, लागे जमलतर्फ अर्थात् ‘हाम्रो’ टेलिभिजनको अफिसतर्फ ।
अफिसको गेटमा पुगेर एकैछिन अडिएँ । गार्डले सोधे, ‘कसलाई भेट्न आउनुभा ।’
‘इन्टरभ्यू दिन,’ मुस्कुराएँ ।
‘यहाँबाट गएर देव्रेपट्टि जानोस् अनि रिसेप्सनमा गएर सोध्नुहोस्,’ गार्डले भित्र पस्ने अनुमति दिए ।
कतै चाइनेभन्दा बढ्ता छिटो हिँडे कि ? आफ्नो हिँडाइ शैली अनुमान गरें । स्वाभाविक बन्ने कोसिस गर्दै रिसेप्सनमै पुगें ।
‘केका लागि होला ?’ रिसेप्सनिस्टले सोधिन् ।
‘अन्तर्वार्ताका लागि बोलाउनुभएको थियो, त्यसैले’
‘यताबाट सिधै अगाडि गएर दाइनेपट्टि जानुस्,’ उनले बाटो देखाइदिइन् । म त्यतै लागें ।
१५/२० जना युवाहरु । भित्तामा टाँसिएको सूचना हेरें । त्यहीँ टाँसिएको रहेछ, सर्ट लिस्ट । मैले पनि हेरें । मेरो नाम दोस्रो स्थानमा रहेछ । खुसी लाग्यो ।
‘हेलो विमलजी,’ एउटाले बोलायो ।
‘हेलो, तपाईं ?’
विकास रहेछ ।
विकास, ऊ मेरो क्याम्पस लेभलको क्लासमेट हो । आईए र बीए. हामीले सँगै पास ग-यौं, पत्रकारितामा । ऊ क्लासको कमजोर विद्यार्थी थियो । म सिपालुमा पर्थें । नामको अल्फाबेट मिल्ने भएकाले जाँचमा पनि ऊ र म सधैं सँगै पथ्र्यौं । म उसलाई सिकाउँथें । मेरो नोटकपी दिन्थें । उसलाई मैले धेरै हेल्प गरेको थिएँ ।
‘तपार्इंले पनि एप्लिकेसन दिनुभएको थियो ?’ उसले सोध्यो ।
‘अँ, दिएको थिएँ । सर्ट लिस्टमा नाम निक्लिएछ । तपाईंले पनि ?’
‘अँ मेरो त इन्टरभ्यू भइसक्यो ।’
‘के सोध्यो ?’
‘खासै केही सोधेन । सामान्य कुरा । अन्तर्वार्ता लिने त मेरै मामा के सोध्नु ?’
‘ए, तपाईंको मामा हो ? मेरो पनि नाम निकाल्नुपर्छ है !’
‘भइहाल्छ नि, किन नहुनु ?’
यस्तै–यस्तै गफगाफ हुँदै थियो । अन्तर्वार्ता दिने मेरो पालो आयो ।
वरिपरि चारजना । दुईजना त मैले कतै देखेको मान्छे । अरु दुईजना पनि कहीँ देखें–देखेंजस्तो लाग्यो ।
‘न्युज के हो ?’
‘समाचारका तत्त्व र गुणहरु ।’
‘राम्रो रिपोर्टरका लागि चाहिने गुणहरु ?’
‘टेलिभिजन फिचर के हो ?’
‘विकास पत्रकारिता के हो ?’
‘कुन बिट ?’
आदि–आदि प्रश्नहरु । मैले सबै प्रश्नको आत्मविश्वाससाथ उत्तर दिएँ ।
अन्तिममा एकजना मोटे÷मोटे, पहिले कतै देखेजस्तो लाग्ने मान्छेले ‘गुड लक’ भन्यो ।
‘थ्यांक यू,’ बाहिरिने तयारी गरें ।
‘रिजल्ट कहिले हुन्छ सर ?’
म नाम निस्कनेमा विश्वस्त थिएँ । झनै उत्साह थोपरियो मनमा ।
बाहिर निस्किएर विकाससँग एक कप चिया पिएँ । मेरो नाम निकाल्न उसको मामालाई भन्न अनुरोध गरें । ऊसँगै पचास रुपैयाँ सापट मागेर कोठामा आएँ ।
लेदर ज्याकेट फुकालें । एकछिन ज्याकेटलाई नियालें । ढलें उही ओच्छ्यानमाथि । दीर्घ श्वास तान्दै सुतें, सपनाका खाता खोल्दै ।
शनिबारको प्रतीक्षामा थिएँ । कुनै चोकमा घण्टौं साथी कुर्नभन्दा कठिन थियो । बरु साथी ढाँटेर नआउन सक्थ्यो । शनिबार त नआएर कहाँ जानु ? आयो ।
सिधै सूचनापार्टी छेउ गएँ ।
अनुराधा कोइराला– समाचार वाचिका
विकास थापा– संवाददाता
प्रतीक अधिकारी– संवाददाता
लक्ष्मण शाक्य– संवाददाता
तर, मेरो नाम लिस्टमा रहेनछ । चैतको हावा चलेपछिको सालघारी भएँ ।
फर्कनै लाग्दा विकासलाई भेटें ।
‘ल बधाई छ ।’
‘तिम्रो नाम निस्केनछ ?’
‘अहँ, मलाई हतार छ, म जान्छु ।’
मैले एकपल्ट मेरो मामालाई सम्झें । सायद मेरो मामा पल्लो बारीमा डल्ला फोर्दै हुनुहुन्छ, यतिबेला ।
जागिर नमिलेको सूचीमा अर्को एउटा ऐजन थपियो ।
र पनि म निराश छैन । सायद पानी ९९ डिग्रीमा पुग्यो, अब एक डिग्री बाँकी छ उम्लन । सोचें, मैले सपना साकार हुने ठाउँमा पुग्न एउटा सिँढी उक्लें ।
पाठकवृन्द, म एक दिन जागिर मिलेपछिको अनुभूति लिएर आउने छु, प्रतीक्षा गर्नुहोस् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख २८, २०७६, २२:१०:००
लकडाउनमा तरकारी बनाउन सिकेँ
भक्तपुरमा २० वर्षीया युवतीलाई सामूहिक बलात्कार गर्ने १ जना पक्राउ